COVID-19 Coronavirus, Dzimba - Chikafu - uye zvimwe zvakakosha zvinodiwa
Nongedzo Yakakwana kune iyo 2020-2021 Flu Vaccine
COVID-19 Coronavirus, Utano uye Utano
Pakati pe194 ne198 mamirioni madhizaini echirwere chefuru akagadzirirwa mwaka we2020-2021 flu muAmerica, uye zvakakosha kupfuura nakare kose kuti vanhu vabaiwe jekiseni mwaka uno wefuruu apo nyika iri kuramba ichirwira COVID-19. Dzidza zvakawanda nezvevharusi yegore rino uye kuti ungaiwana sei.
Nongedzo kune Kunze Kwekuchengetedza & Hutano
Utano uye Utano
Kana iwe uchida zvakasikwa, iwe uri mune yakanaka kambani. Vanenge hafu yevaAmerica vane makore matanhatu zvichikwira vakaenda kunze kwechimwe chiitiko chimwe mu6, vachimhanya uye vachimhanya senzvimbo dzinozivikanwa kwazvo. Pamwe ndizvo zvako — kurongedza bhutsu dzako uye kumhanya. Kana kuti pamwe unosarudza kufamba musango, kuchovha bhasikoro, kushambira kana mutambo wakarongeka.
Chero chii chiri icho chinokukwezva iwe kunze, kuburuka pasi nekupiswa nezuva kana kurasika kunogona kuisa chakakomba crimp muzuva rako. Kwete ndatenda!
Chinhu chakanaka iwe une ino inobatsira gwara. Verenga pamusoro pemazano kuitira kuti usarwiswe nemabheya kana kupedzisira wapisa kupisa kwezuva kana kurwadza kwekusuwa.
Kusimbiswa - iyo Gay uye Lesbian Mormon kuunganidzwa kuU yeU Marriott Library
Utah Raibhurari Zviwanikwa Portal
Kusimbisa Nhoroondo yakachengetedzwa paInternet Archive Wayback Machine
Kusimbisa Kuchengetedza kweIntersex Vanhu 2020
Dhaunirodha PDF Gwaro:
Kwemakore angangoita gumi, National LGBT Health Education Center yanga ichipa zvirongwa zvedzidzo kunzvimbo dzezvehutano nemamwe masangano ekuchengetedza hutano nechinangwa chekusimudzira hutano hwehutano uye kubvisa musiyano wezvehutano kune vanhu vanoita zvepabonde nevazhinji vanhu vashoma. Munguva pfupi yapfuura, isu pamwe nesangano revabereki, The Fenway Institute, Fenway Health, tauya kuzoziva kukosha kwekuwedzera kushingairira kusanganisira hutano hwevanopokana vanhu muchinangwa chedu uye zvirongwa zvekudzidzisa. Naizvozvo, ma pro-gramu edu ese ave kushandisa chirevo chinonzi LGBTQIA +, icho chinoreva ngochani, ngochani, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, uye vese vanhukadzi nevanhurume vashoma. Sechikamu chekuzvipira kwedu kutsigira hutano hwevose LGBTQIA + vanhu, isu takanyora inotevera inotevera nharaunda-inozivisa kiriniki gwara pane yekutanga kuchengetedzwa kwevanhu vanoita intersex vanhu. Mufambiro unopa muongororwo wemazwi nepfungwa dzepasi, kushushikana kwehutano hwevanhu ve intersex, intersex-af- firming maitiro, uye zviwanikwa zvekuwedzera kudzidza.
NATIONAL LGBTQIA + Hutano DZIDZO DZIDZO
Chirongwa cheiyo Fenway Institute
ASL Inotungamirirwa Kufungisisa
Bi & Pan - Gwara Rinobatsira
Bisexual, Pansexual, uye zvimwe Zvepabonde Fluid Chitupa
Bi Resources Center
Bi Vakadzi Quarterly
Tinya kubatana nesu paSocial Media!
Yekuchengeta Gwaro Rekubatsira Mhuri Kugonana neCovid-19
Inodzidzisa vabereki nevachengeti pane iyo coronavirus, nzira yekudzivirira uye kuchengetedza mhuri dzavo nevana, pamwe nemabatiro aungaita kushushikana nekushushikana.
Batanidza kune gwaro.